Midowga musharixiinta oo war ka soo saaray qorshaha RW Rooble kula wareegey maamulka doorashada & amniga
May 2, 2021 Xuseen 12
Midowga Musharaxiinta ayaa soo dhaweeyay Go’aankii Xildhibaanada Golaha Shacabka ay dib uga laabteen muddo kordhintii ay sameeyeen, ayna dib u soo celiyeen heshiiskii 17-kii September oo ay horey u gareen Madaxda dowladda iyo kuwa maamul Goboleedyada.
War-saxaafadeed kasoo baxay Midowga Musharaxiinta ayaa waxaa lagu sheegay inay taageersan yihiin in Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu si buuxda ula wareegay maamulka doorashooyinka iyo amniga dalka.
Musharaxiinta ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta kala shaqeeyaan qabsoomida doorasho xor iyo xalaal ah, kuna dhaca waqtiga ugu dhow.
Golaha ayaa shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyeeyay dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay Magaalada Muqdisho ee sababay dhimasho, dhaawac iyo Barakac, iyagoona sheegay in Madaxweyne Farmaajo mas’uuliyadeeda uu qaadayo dhibaatadii dhacday.
Midowga Musharaxiinta Madaxweyanaha ayaa soo jeediyay in Xukuumadda xilgaarsiinta magacaawdo hoggaan mideyn kara Ciidanka dowladda Federaalka, maadaama ay sheegeen in Ciidamada ay u kala qeybsameen diidmada iyo difaaca muddo kororsiga sharci-darrada ahaa.
Wiilasha 4 ta degmo ee Mr. Fiqi noo noo sheeegay miyaa midawgaan?! Xaad marka doorasho uga baahantihiin, nin walbaahi degmada uu taabsaday MADAXWEYNE haka naqdo!
Kkkkkk shaxdii NABAD IYO NOLOL WAY SHAQEYSAY MADOOBE WUU MUCARADAY MIDOWGII MUSHARAXIINTA HAWIYE NINKOODA WAYSOO DHAWEEYEEN .KKKKK EE DOOLAR QAATE DENIYOW ADIGU XAGEE LAGUU GU XISAABIYAA ? KKKKKK JAWAAAAAB DAG DAG AH KKKKK WAXAAN MAQLI JIRAY “CIDII SIR KU HESHIISO CAAD AYUU KU CODOOWAA . WAA BILAW GII ISBUR BURINTA EE BADBAADO QARAN. KKKKKK ALLAW HANA CEEBEYN DAD FASHILMAY DHAH.
Dadka ay xaajo “doorasho qof-iyo-cod ah” kaga ektahay ee xalka kamadambeyskana u arka, waxaa sixun useegan waxa doorashadan qalaad kuhoos xardhan ee hadhow kuhabsan doona. Doorasho sideedaba waa wax iska cillanan, waxaana macne uyeela hadba hannaanka siyaasadeed iyo dawliga ee ay salka kuhayso. Doorasho iskeed isaga madhacdo.
Waxaa doorashada noocan ah kadambeeya hannaanka caqiido-iyo-dhaqandiidka ah ee Galbeediga. Waa hannaan wax allaale iyo wixii diin iyo dhaqan ah dunida kazuulin raba – gaar ahaanna caqiiqada Islaamka. Waloow aysan doorasho noocan ahi haddeer dalka kaqabsoomi karin ( iga qanciya sida musharrax Buulaxaawo kasoojeeda Burco, Badhan, Baydhabo, mise Boosaaso iskusi looga soo codeyn doono!), marka ay dhaqangasho waxaa dalka qaab dabiici ah uga dhaqangalay hannaankaas isaga ah.
Waa hannaanka Soomaalida kulaazimi doona inay duudduub kulaqdo waxa looyaqaanno “xuquuqul-insaanka” caalamiga ah, kuwaasoo ay gundhig uyihiin qowmuluudnimada; baararka u gaarka ah; baararka khamriga iyo daroogooyinka; inay Itoobiyaanku dalka kusoo qulqulaan, daaro kajeexdaa, ganacsiyo kafurtaan, dhaqankooda kumuujiyaan, kaniisado ka dhistaan, Soomaalida guursadaan iwm). Itoobiyaanka keli ahna ma ahee waa inta qowmiyadood oo dalka kusoo haajiri doonta.
Hannaankaasu waa mid duudduub looqaato ee ma aha mid waxa aad doonto kaqaadanayso oo wixii kale aad iskatuurayso: qaabkaas umashaqeeyo sidiisaba (there is no “cherry-picking” in this system). Marka, doorashadan aan qummaati loogasii baaraandeglin ee madaxmadaxa la iskugutuurayo waxa kadambeyn doona waa la arki, dhaqanzuul taam ahse haloo diyaar garoobo. Waxaana hawshaas fulin doona kuwa naga dhashay ee “gaaloobay” marka dalka lagusoo daabulo oo ay “doorashooyinka” mustaqbalka dambe kusoobaxaan.
Oday Wax-Og says:
@Awlal waxa adi kuu cad soomaali ka modow boowe marka dadaalka badi sxb. Duulkaan ayakaa lays tusey oo isku maqan marka la arki doonee maalin aqliga kusoo dago oo waxaa sheegeyso indhohooda ku arkaan but could be too late.
@@@’Oday Wax Og,
Boowe aad baan kaaga mahadinayaa guubaabadaada qiimaha badan, adiga iyo akhyaar kale oo badan oo aynu isku qaddiyadda iyo fikirka nahay. Waana ballan inaan halganka siiwado wixii karaankay ah – Eebbe Idamkii iyo Fadligiiba.
KKKKKK,FARMAAJO WUU FASHILMEY CEEBOOBEY MAR HADII XABAD LOOLA TAGEY……HOREY AYAA WAXAA LOO YIRI NIN CAREYSAN, CUQDADEYSAN ,CAADIFEDSAN UMMAD MA HOGAAMIN KARO… SOOMALIDU WAXEEY TIRAAH “GOD DHEER HA QODIN HADAD QODANA HA DHEEREN KU DHI DOONTIDA MA OGID” WAANA WAXA HADA FARMAAJO HEYSTA
Kkkkkkk oo maxaa farmaajo hayta ? soo isaga kaligii villa somali dhax fadhiya sidii nin dhaxal ku helay oo kale ? Maxaase kuwa kale udiiiday villa somali? Aqliga ha shaqeeyo farmaajo kursigaas villa somali yaala waa sidii utaabsaday weyaan . Kkkkkk
Cabdulle Muuse says:
Somaalidu waxay ku maahmaahdaa:
Ninkaad tahay Sheeg,, waxaad tahay aan sheegee!
who are these People? ma dad jiraa, mise web cite-ka Punttlandtimes.ca ayaa abuuray.
waxay isoo xasuusiyaan kooxdii “istaahil jookar”.
Bal arrintaan fiiro ha loo yeesho.
ma jirto wax macne ah oo ay soo kordhiyaan oo aan ka ahayn inay iska dhigaan dad doodaya
ma aha dad jira.
@@ C.lahi muse
Maya computer ayaa doodaya kkkkk
Waxa ay doonaan ha ahaadeen ee, ma waxbaay adiga kaala maqanyihiin?
Meeshan waa masrax bulshaweynta ufuran oo ay cid waliba xuquuq taam ah u leedahay inay afkaarteeda, aragtiyadeeda, iyo dareenkeeda si xor iyo xarago leh ugu muujiso.
Dadyowga kale ee ilbaxda ahi, qofka toos uma duraan ee qodobbada uu ka faalloodo ayay kuraddiyaan oo kula doodaan. Ruux aan waxba kuudhimin meel cidlaa lagala maqaado saaxiib – nin weyn sharaf uma aha.
waxaa jira wax la yiraagdo thought provoking oo ah in dadku ay ku curiyaan Fakrad iyo araa iyo wax kale oo la yiraahdo Thoght control oo dadka lagu khaldo oo loo bilaabo wax dood u eg laakiin bilaa macna ah oo looga leexinayo qadiyadda runta ah.
Arrintaasi waa xeel khatar ah, waxaana kuu caddayn kara ma arkasid Puntlandtimes.ca iyo mulkiilaheeda oo ka hadlaya wax innaba dan u ah dadka reer Puntland oo mar kasta wuxuu la jiraa cadowgeeda. is that fair journalism, mise waxaa la doonayaa in la baado madaxda Puntland.
Puntlandtimes.ca marna kama hadlaan raadka ay reebayso dhaqan xumada Farmaajo oo uu siyaasadaynato waxbarashadii, ganacsigii, horumarkii iyo hawadii oo ay dhalin karto in Puntland is weydiiso sababta ay uga qayb qaadanayso dowlad dhexe oo laga dhigto aalad ama waran lagu diriro dadkeeda.
Sorry, to say that, but that is the fact.
Waxoo dhami waa mashruuc been ku dhisan ee magaca ka badala oo u bixiya AntiPuntlandtimes.ca
Runsheeg xaqaani says:
Waa dhab waa la is khaldaa oo la is jaah wareerinaa, habaar maahoo ciidan fallaagoobey ha lagu daro ciidankii xalaasha ahaa, sow qurmin maayaan oo ciidanka curdinka oo dhan akhlaaqda askarinimo kama lumeyso. Ciidanka fallaagoobey waa in ugu yaraan ay is dhiibaan, ka dibna sida shabaabka dhaqan celin ugu yaraan lix bilood ah la geliyaa.